Wararka Maanta: Arbaco, July 25, 2018-Wasiirka Waxbarshada Soomaaliya : Ma jirto Jaamacad aan aqoonsannahay
Arbaco, July, 25, 2018 (HOL)–Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hindaha iyo Tacliinta Sare Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa markii ugu horeysay sheegay in aysan jirin Jaamacad ay aqoosan tahay Wasaaraadiisa, xitaa marka lagu duro Jaamacada Ummadda Soomaaliyeed oo hoos-tagta dowladda Soomaaliya .
Wasiirka ayaa sheegay in guud ahaan marka la eego Jaamacada ka dhisan dalka midkood-na aysan laheyn astaamihii ay sharuudihii looga baahnaa in ay Jaamacad yeellato, taasoo keentay ayuu yiri in ilaa iyo hadda aysan jirin Jaamacad ay aqoonsan tahay xukuumadda.
‘’Annaga ma jirto Jaamacad aan aqoonsannahay, Jaamacad ahaan aan u aqoonsannahay oo aan dhihi karno Jaamacada-ni waan aqoonsannay oo qaabka ay u sameysan tahay iyo tacliinta ay bixineyso aan ku qanacsannahay, xitaa Jaamacada Ummadda waayo Jaamacadaha dalka ka dhisan ayeey ka mid tahay’’ ayuu yiri Wasiirka.
Laakiin Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ayaa sheegay in ay jiraan jaamacado soo buuxin karin marka la eego heerka waxbarasho ee Jaamacadeed, isaga oo yiri’’ Waan og-nahay in ay jiraan Jaamacado soo buuxin doona heerkii caalamiga ahaan Jaamacadeed, laakiin wali iskuma aanan iman oo kama aynaan wada hadal arintaa, marka aad Koontaroolno kaddib Jaamacadahaas oo ay soo buuxiyaan sharuudaha aan isla garanno ayaan dhihi karnaa waa Jaamacad rasmi ah’’ ayuu yiri hadalkiisa sii raaciyay.
Mar uu ka jawaabayay su'aal aheyd mar haddii aysan Jaamacad ahaan u aqoosanneyn sababta ay ruqsada u siiyeen ayuu yiri’’ Waxna waa diiwaan-galin, waxna waa aqoonsi, marka annaga sabab aan u diidi karno in ay ka shaqeeyaan dalka ma jirto, sidaa ayaan u diiwaan-galinnay’’ ayuu yiri Wasiirka.
Lama oga jawaabta ay ka bixin doonaan mas’uuliyiinta Jaamacadaha dalka hadalka ka soo yeeray Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hindaha iyo Tacliinta Sare.